Myawaddy TV drama Jumong - video.phpmyanmar.com
Myawaddy TV Drama Jumong
Posted By - Ko Ko - November 13, 2007
TV Drama Jumong
Dongmyeongseong of Goguryeo (King Jumong)
'Go' Royal Family
Video clips of Jumong TV Drama
Pictures from Jumong TV Drama
ဒီနေ့တော့ မြဝတီ ရုပ်သံမှာ ပြနေတဲ့ ရာဇဝင်တွင်တဲ့သူရဲကောင်း ဇာတ်လမ်း တွဲ အကြောင်း ဖေါ်ပြ ပါမယ်။ ဒီ ဇာတ်လမ်း တွဲ အကြောင်း ကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၉လ လောက်က တခါ ဖေါ်ပြခဲ့ ဖူ ပါတယ်။(link)
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်၊ ခရစ်တော် မပေါ်မှီ ၃၇ နှစ် (BC 37) လောက်က ကိုးရီးယား နိုင်ငံ မြောက် ပိုင်း မှာ Goguryeo လို့ အမည်ရှိတဲ့ နိုင်ငံကြီး တနိုင်ငံ ပေါ်ပေါက် ခဲ့ ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံကြီး ကိုတည် ထောင်ခဲ့ သူကတော့ Jumong (58 BC-19 BC) လို့ အမည်ရှိ တဲ့ ကိုးရီးယား စစ်ဘုရင်ကြီး တစ်ပါး ဖြစ် ပါတယ်။
Goguryeo ဟာ လက်ရှိ ကိုးရီးယား တောင် မြောက် နှစ်နိုင်ငံ ပေါင်းထက် သုံးဆ လောက် ကြီးပါတယ်။ Goguryeo နိုင်ငံတော် ဟာ နှစ်ပေါင်း ၇၀၅ နှစ် ကျေုာ် သက်တမ်းရှည် ကြာခဲ့ ပြီး Jumong မင်းဆက် ပေါင် ၂၈ ဆက် တိတိ အုပ်စိုး သွားခဲ့ ပါတယ်။
ယခု ခေတ် မှာ Jumong မင်းကြီး ရဲ့ မျိုးဆက် တွေကို 'Go' နဲ့စတဲ့ Jumong မင်းကြီးရဲ့ မျိုးဆက် အမည်နဲ့ ခေါ်တွင် နေကြ ဆဲ ဖြစ် ပါတယ်။
MBC historical drama 'Jumong'
Jumong ဘုရင်ကြီး ရဲ့ မှတ်တမ်း တွေကတော့ များများ စားစား မကျန်ခဲ့ ပါဘူး။ ပါးစပ် ရာဇဝင်(Legends) တွေကတော့ ရှေးခေတ် သူရဲကောင် များရဲ့ ထုံစံ အတိုင်း အများအပြား ကျန်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒီသူရဲကောင်း ဘုရင် ကြီး ရဲ့အကြောင်း ကို MBC ရုပ်သံ ကနေ Jumong လို့ အမည်ရှိ အခန်းဆက် ပေါင်း ၈၁ ခန်း ရှိတဲ့ တီဗွီ ဇာတ်လမ်း တွဲကြီး အဖြစ် နဲ့ May 15, 2006 မှ စတင် ပြသခဲ့ တာ March 6, 2007 မှာ episode 81 နောက်ဆုံး အခန်းဆက် ကို ပြသ သွားခဲ့ ပါတယ်။
Jumong ဇာတ်လမ်း တွဲ ဟာ ၂၀၀၀ ခုနှစ် မှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် အတွင် ပြသ ခဲ့တဲ့ ကိုးရီးယား တီဗွီ ဇာတ် လမ်းတွဲ တွေ ထဲမှာ တတိယ လူကြိုက် အများဆုံး ဇာတ်လမ်း တွဲဖြစ် ခဲ့ ပါတယ်။
ဲဂျူးမွန် ဘုရင်ကြီး အဖြစ် မင်းသား Song Il Kook မှ သရုပ်ဆောင် သည်။
ဆိုအောနိုး မိဘုရား ကြီး အဖြစ် မင်းသမီး Han Hye Jin သရုပ်ဆောင် သည်။
ဒီဇာတ် လမ်းတွဲ မှာ သိထားသင့် တဲ့ ဇာတ် ကောင်များ ကတော့ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ရင်ကြီး ဂျူးမွန် အဖြစ် Song Il-gook
ဒုတိယ ဇနီး ဆိုအောနိုး အဖြစ် Han Hye-jin
ပထမ ဇနီး Ye So Ya အဖြစ် Song Ji Hyo
ဖခင်အရင်း ဟဲမူဆူး အဖြစ် Heo Joon-ho
မိခင် ယူဝါ အဖြစ် Oh Yeon-soo
မွေးစား ဖခင် Buyeo နယ်စား Geumwa အဖြစ် Jeon Gwang-ryeol
နန်းလုဘက် မင်းသား ဒယ်ဆို(အက်ိုကြီး) အဖြစ် Kim Seung-soo
နန်းလုဘက် မင်းသား ရောင်ဖို (အကိုလတ်) အဖြစ် Won Ki-joon
မိဘုရားကြီး Wonhu (ဒယ်ဆို ၏ မိခင်) အဖြစ် Kyeon Mi-ri
နိမိတ်ဖတ် ဆရာမကြီး Yeomieul အဖြစ် Jin Hee-kyeong
ကွန်ဝါး နယ်စား ၏ အကြံပေး(နန်းရင်းဝန်) Budeukbul အဖြစ် Lee Jae-yong
ဆိုအောနိုး ၏ ဖခင် Yeontabal အဖြစ် Kim Byeong-ki
နောက်ထပ် ရေမည့် blog post တွေမှာ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း တွေကို ဆက်လက် ဖေါ်ပြ သွားမှာ ဖြစ် ပါတယ် (ဇာတ်လမ်း အကျဉ်း ကိုပဲ တော်တော် ရေးရ မှာပါ)။
Tags : korean drama | korean history | korean news
Summary - Goguryeo (37 BC - 668 AD) was one of the Three Kingdoms of Korea. The founder was King Dongmyeongseong of Goguryeo (58 - 19 BC), also known by his birth name Jumong. MBC airedaTV drama Jumong in May 2006, dedicating to the great king. The final episode (No 81) was concluded on March 2007. It is now showing an 7pm Myawaddy TV drama with Myanmar sub-titles.
End of Article - Myawaddy TV drama Jumong
zeyar November 2, 2012 - 12:06 am
ကြယ်စင်နမိတ် နှင်. သက်ကယ်ဓား
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/288/myawaddy-tv-drama-jumong
Rendering time 0.0243 sec